Ikati laseHigander laseCuddly | Amakati kaNoti
IHighlander yibhola elihle futhi elithandekayo loboya elikwazi ukunqoba wonke umndeni ezinsukwini ezimbalwa. Kuyisilwane esithanda ukuba yisikhungo sokunakwa nokuthi basinikeza uthando olukhulu, ngakho-ke singumngane ofanele kubantu abahlala bodwa noma abafuna ukuba noboya obuthandekayo ekhaya.
Yize kunguhlobo lwe-hybrid, akufanele ukhathazeke nganoma yini ngoba iyisilwane esivumelana kahle nokuhlala endlini.
1 Umsuka nomlando we-Highlander
3 Ukuziphatha kwe-Highlander nobuntu
4.4 Ukuthandana nenkampani
5 Ibiza malini ikati le-Highlander?
6 Izithombe zekati yase-Highlander
Umsuka nomlando we-Highlander
I-protagonist yethu iyisibindi esenziwe e-United States ngo-1995, lapho ikati lohlobo I-curl yaseMelika uhlangabezane ne-lynx. Kungenzeka ukuthi imfucumfucu yokuqala yamantshontsho ezalwa inesidumbu sikamama kodwa ngesimilo sikababa, ngakho-ke lapho nje sebekhulile bawela nezinye izinhlobo zekati ezifuywayo zeCarl ukuze bazenze zithambe kakhudlwana.
Eminyakeni eyishumi kamuva, ngo-2005, i-TICA yabhalisa lolu hlobo esigabeni seNew Preliminary Breeds.
Leli kati liyisigaxa esikhulu: owesilisa unesisindo esisuka ku-6 kuye ku-9kg nowesifazane kusuka ku-4 kuye ku-6kg. Inomzimba onemisipha futhi omile, umbozwe yizingubo zoboya ezingaba zinde noma zifushane futhi zinoma imuphi umbala. Ikhanda linosayizi ophakathi nendawo, namehlo nawo aphakathi nendawo anomumo ovundlile. Izindlebe zinkulu futhi zigobile, okufana ne-American Curl.
Imilenze ilinganiswe kahle nawo wonke umzimba; ezingemuva zinde kancane kunezangaphambili. Umsila mncane futhi mfushane, ubude ngamasentimitha amahlanu.
Ukuziphatha kwe-Highlander nobuntu
Kuyisibindi, kumnandi nje. Umnandi kakhulu, unomusa, uyadlala, unelukuluku futhi uthanda ukuchitha isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka nabantu.. Ngaphezu kwalokho, kungaba abangane bobabili nezingane nezinye izilwane. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi akakwazi ukubekezelela ukuchitha isikhathi eyedwa, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi ngaso sonke isikhathi abe nomuntu eceleni kwakhe.
Kufanele idle inyama (kungaba obomvu noma oluhlaza okwesibhakabhaka), ukuba yisilwane esidla inyama. Ngalesi sizathu, kunconywa kakhulu ukuthi ugweme ukunikeza okuphakelayo okunothile okusanhlamvu, ngoba yize kushibhile kakhulu, ngeke kunikeze zonke izakhamzimba ozidingayo. Phakathi kwemikhiqizo eneluleka kakhulu ama-Applaws, i-Orijen, i-Acana, noma i-True Instinct High Meat phakathi kwabanye.
Ezinye izindlela ezinhle zokondla yi-Yum Diet, ne-Barf Diet. Lesi sakamuva ngokungangabazeki sihamba phambili, inqobo nje uma kulandelwa izeluleko zochwepheshe ekuphakeleni izinyoni. Futhi ukuthi, uma ishoda ngomsoco othile, impilo ye-feline ingaba sengozini enkulu.
I-Pelo: uma sibheka ukuthi mfushane, nokuthi unakekela nokuyigcina ihlanzekile ngaso sonke isikhathi, kufanele uyihlikihle nsuku zonke.
Amazinyo: kusukela ebuntombini kuyalulekwa ukujwayela ukuxubha amazinyo, ngoba ngale ndlela azohlala isikhathi eside kakhulu.
Amehlo: uma ubona ukuthi bane-legañas, kufanele ususe nge-gauze.
Izindlebe: zihlole ngezikhathi ezithile, futhi uma ubona ukuthi ziqoqa i-wax eningi, zihlanze ngamaconsi athile udokotela wezilwane akutshela wona.
Impilo yakhe yinhle, noma kunjalo kuzofanele umyise ukuyohlolwa uma ubona ukuthi ngokuzumayo uqala ukudla kancane kunokujwayelekile, uphethwe umkhuhlane, noma usola ukuthi akaphathekile kahle. Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi uyithathe ukuze uthole imigomo ephoqelekile phakathi nonyaka wokuqala wokuphila, kanye nama-booster shots wonyaka; i-microchip nayo kufanele ifakwe.
Uthando nenkampani Ziyinto okungafanele ilahleke noma yiluphi usuku. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi ucabange kahle uma uzokwazi ukunakekela ikati laseHigander, ngoba uma kuvela kamuva ukuthi akunjalo, isilwane esizoba nesikhathi esibi kakhulu kuzoba isilwane.
Uma uzimisele futhi uzimisele ukumnakekela, siqinisekile ukuthi kungekudala uzomenza abe ngumngani wakho omusha onemilenze emine.
Ibiza malini ikati le-Highlander?
Uma uphupha ngokuphila nekati elihle laseHighlander, funa i-cattery ebonakala inzima futhi ekunika ukuzethemba. Ungasheshi ngokweqile. Uma uyithola, chitha isikhathi namakati, buza imibuzo engahle ivele, futhi lapho nje usuyicacisile, thenga umdlwane onqobe inhliziyo yakho. Intengo ithi 800-1000 ama-euro.
Enye indlela ukuyithola esitolo sezilwane, lapho intengo izobe iphansi. Kepha kufanele wazi ukuthi ukuyithenga lapho kunezinkinga, ngoba ngokwesibonelo ngeke ukwazi ukuhlangana nabazali bekati noma okuthile ngempilo yayo.
Izithombe zekati yase-Highlander
Ukuqeda, sizokushiya nochungechunge lwezithombe zaleli kati elihle:
Isithombe - Petpaw.com.au
Isithombe - Omlet.co.uk
Isithombe - Doglib.com
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati laseHigander lase-cuddly
Kubiza malini ukuhamba nekati ngendiza
Okufanele ukwenze uma ikati lami lishisa